Japanese Spitz: 14 Yakanaka & Inonakidza Chokwadi Nezve Ino Anoshamisa White Imbwa - Inobereka
Japanese Spitz: 14 Yakanaka & Inonakidza Chokwadi Nezve Ino Anoshamisa White Imbwa
IJapan Spitz ndeimwe yembwa dzichangoburwa kugamuchirwa kuAmerican Kennel Club.
Kwete kana makore zana okuberekwa, uye zvakadaro iyi yakangwara uye inofadza canine yave ichizivikanwa kubvira zuva rekutanga.
Inozivikanwa nevamwe seGuru Imbwa, nekuda kwechitarisiko chavo chena chena, iyi imbwa rudzi rwakatanga kuonekwa muna 1920.
Imbwa inogara isinganzwisisike , veruzhinji havanyatso kuziva zvakawanda nezvavo, sezvo vachiwanzovharwa neakafanana, uye zvakadaro akasiyana imbwa dzeSpitz (kureva Samoyeds).
Kuyedza uye kupindura mibvunzo yako yese, heano gumi nemana akanaka, anonakidza uye mashoma anozivikanwa nezve eJapan Spitz ...
1. Japanese Spitz Inozivikanwa Se 'Cloud Imbwa'
2. Imbwa yeJapan Spitz Yakaberekwa Kubva kuWhite German Spitz Imbwa
3. Japanese Spitz Imbwa Dzinomira Pakati pe12 kusvika 15 Inches Yakareba
4. Iyi Imbwa Ine Biannual Malting Mwaka
5. Iyo Japan Spitz Hupenyu Hwemakore Iine makore gumi kusvika gumi neshanu
6. MaJapan Spitz Imbwa Anoda: Agility, Flyball uye Frisbee
7. Ivo Imbwa Yemagariro
8. MaJapan Spitz Puppies 'Mutengo Pakati Pe $ 1 000 Uye $ 2,500 USD
9. Mhuri yaSpitz Inosanganisa Imbwa Dzakawanda
10. MuJapan Spitz Anofanira Kuva Muchena
11. Iyi Rudzi Rwekubereka Haugoni Kutsungirira Iyo Cold Chaizvo Zvakanaka
12. Saizi Yeiyi Imbwa Inosiyana
13. Idzi Imbwa Vanotsvaga Kuchenjerera
14. MaJapan Spitz Haasi Iye Anodya Zvakawanda
Kazhinji zvinokanganiswa segore rinofamba, iyi imbwa chena iri pakati nepakati!
IJapan Spitz idiki kune yepakati chena imbwa, yakagadzirirwa kuva shamwari imbwa.
Ivo vanowanzo daidzwa 'Cloud Imbwa', nekuda kwechitarisiko chavo chena chena .
Kunyangwe iyi imbwa iripo muAmerica kubvira kuma1980, ivo havana kunyoreswa neAmerican Kennel Club.
Izvi zvinokonzerwa nekufanana kweJapan Spitz kune iyo American Eskimo Imbwa , iyo Pomeranian uye Samoyed.
Iyo AKC pachinzvimbo yakavabvumidza kune avo Foundation Stock Service (muna Kubvumbi 2019), yakasarudzika kunyoresa sevhisi yembwa dzakachena dzisingakwanise kunyoreswa neiyo main purebred dhatabhesi.
Ivo vanozivikanwawo nekwavo kirabhu yekuberekera inozivikanwa seJapan Spitz Kirabhu yeUSA.
IJapan Spitz yakatanga kuonekwa muJapan muma1920s nema30s.
Pakati pa1921 na1936 rudzi rwacho rwakanyatso sarudzwa, kuberekana mumarudzi mazhinji embwa dzeSpitz kubva pasirese.
Vaberekesi vakatanga neGerman Spitz Imbwa (inova inonyanya kuchena imbwa dzinza)
Idzi imbwa dzeGerman Spitz dzakauya kuJapan kuburikidza neChina, mushure mekukunda 1921 yenyika imbwa show
Muna 1925 imbwa mbiri dzeSpitz dzakatorwa kubva kuCanada
Iyi imbwa inotsvakwa zvakanyanya muSweden nekuda kwavo kutaridzika, hunhu hunhu uye njere.
Iyo yekupedzisira mhando yemhando yakanyorwa kutenderedza 1945 uye yakagamuchirwa neJapanese Kennel Club muna 1948.
Kubva ipapo, iyo yakajairwa standard inoramba isina kuchinja uye imbwa iyi kufarirwa yakapararira pasirese.
IJapan Spitz imbwa yakatendeka inoda kuve padivi pevaridzi vayo.
Japanese Spitz akafanana nemakore anogona kuhukura!
Vane hombe, jasi jena .
Mhando yemhando dzakatarwa neFederal Cynologique Internationale inotsanangura chiJapan Spitz sembwa iri pakati, iine muromo wakapamhamha, nzeve dzakapetwa katatu, uye muswe muhombe, une hunyoro unopoterera kumusana kwavo.
Ivo zvakare vane mane muhuro, vachivapa chinenge shumba yakaita sekuonekwa .
Iyo yakachena chena mbiri jasi ndiyo inonyanya kuoneka chimiro cheichi imbwa rudzi rwechitarisiko.
Japanese Spitz inowanzo mira pakati pe12 kusvika ku15 inches kureba uye inorema pakati pe10 ne25 lb.
Nekudaro, iyo yemhando yemhando inosiyana pakati pekennel makirabhu (isu tinokurukura izvi zvakadzama muchokwadi # 12).
Iyi imbwa yakanyorovera ine jasi gobvu.
Iwe unoregererwa nekufunga kuti varidzi vanopedza zuva rese vachikwesha jasi rakanaka!
Ichokwadi ndechekuti maJapan Spitz ari chaizvo imbwa yakaderera kwazvo yekuchengetedza .
Kuti vamise jasi ravo kubva mukukanganiswa, rinoda kukwizwa kamwe chete kana katatu pasvondo. Kushandisa pini bhurasho kunotendera iye muridzi kuti apfuure neakakora majasi avo.
Izvi zvinofanirwa kuwedzera mukati memwaka wemalting (unoitika kaviri pagore) kumabhurashi ezuva nezuva.
Idzi imbwa hadzifanirwe kushambidzwa kazhinji nekuda kwerudzi rwavo rweganda . Kuwedzeredza kubvisa mafuta akakosha uye nekuomesa ganda ravo.
Jasi ravo harinyatso chengetedza hwema hwevhu, saka kugeza kashoma pagore kunenge kuri kupfuura kunaka.
IJapan Spitz Iyo Inonakidza Uye Inotamba Imbwa, Yakakura Yemhuri
Kazhinji, iyo Japanese Spitz Imbwa ine hutano chaizvo uye inowanzo kurarama kubva pamakore gumi kusvika gumi nematanhatu, ichivaita imwe yeiyo imbwa inorarama kwenguva refu .
Iyi Imbwa Ine Hutano Sei?
Iyi imbwa inotambura nematambudziko ehutano, akajairika e inova Patellar Luxation .
Patellar Luxation kuderedzwa kudiki kwemabvi akabatanidzwa.
Izvi zvinonzwisisika akapfeka maburi mumabvi shwashwa , pakupedzisira, izvi zvinoguma nekurwadziwa uchifamba, zvinoenderana nekuomarara kwemamiriro acho anogona kutarisirwa nemushonga uye / kana kuvhiyiwa.
Idzi imbwa dzeSpitz dzine hupenyu, uye rudzi rweJapan hazvina kusiyana; imbwa dzinopenga dzinoda kuve kunze.
Vanoda maminetsi makumi mana nemashanu ekurovedza muviri zuva nezuva, zvakakamurwa kuita madiki madiki.
MaJapan Spitz anonakidzwa nekushambira pane imwe nguva, uye hunhu hwavo hunonakidza hunoreva kuti vanowanzo kuve vekutanga mumvura.
Rudzi irworwo runogona kunakidzwa nemimwe mitambo ye canine senge agility, flyball, frisbee kana kunyatsoteerera kuteerera.
Imbwa dzeJapan Spitz dzinotonakidzwa nekumhanya kwenguva nenguva nevabereki vavo.
Kumwe kutamba kune simba, sekukweva kwehondo, kutora kana frisbee, zvakare yakanaka fomu yekurovedza kune iri imbwa rudzi!
Aya maekisesaizi anogona kushandiswa panzvimbo yekufamba pane imwe nguva, asi rangarira imbwa dzinoshamwaridzana kwazvo uye dzinonakidzwa nekuve kunze uye kusangana nevanhu vatsva .
IJapan Spitz imbwa inoshamwaridzana zvakanyanya, uye ivo vanoda kuve kunze uye nezve.
Zvese zvinhu zvinonakidza uye zvinonakidza kusangana nerudzi urwu, kubva pakuwana puppacino kuStarbucks kuenda kupaki imbwa, kana chimwe chinhu chakareruka sekufamba kuenda kumusuwo wepamberi kuti utore tsamba.
Idzi imbwa dzinogona kuve dzine hushamwari uye dzinobuda, asi kana kushamwaridzana zvisirizvo vanogona kunyara zvisingaite uye kutya.
Kuti udzivise izvi, imbwa dzeJapan Spitz dzinofanirwa kuziviswa kuvanhu vazhinji, nzvimbo uye zvinhu pavanenge vari vadiki.
Idzi imbwa dzinowanzo kutora zvinhu zvakawanda munzira yavo, asi, chenjedzo inofanira kutorwa kana iwe ukacherekedza zviratidzo zvekushushikana kwekushushikana .
MaJapan Spitz vana havawanzoitika, hazviite kuti iwe udaro tsvaga imwe munzvimbo yako yekuvanda . Izvi, zvakasanganiswa nehukuru hweturu hukuru huri pakati peye neatanhatu imbwa, zvinoreva kuti zvinogona kunge zvakaoma kuwana mbwanana.
IAmerican Kennel Club ine runyorwa rwevabatanidzi vanobatana avo vanobatwa kumaAKCs zviyero.
MaJapan Spitz vana 'anodhura pakati pe $ 1 000 uye $ 2,500 USD.
Nehurombo, hapana chaiwo mashevhisi ekununura masevhisi muUSA, zvinogona kunge zvichikosha rwendo kuenda kunzvimbo yako yekugara, asi imbwa idzi kazhinji dzinonetsa kuwana.
Pakati pezvimwe zvinhu zvakawanda, iyo Japanese Spitz yakanyanya fotogenic.
Kana iwe usingakwanise kuwana wechiJapan Spitz, kune dzimwe imbwa dzakawanda mumhuri yavo yekubereka.
Mhuri yaSpitz inopindirana nembwa zhinji, uye saka panogona kunge paine imwe nzira yakanaka kwauri:
Imbwa dzeJapan Spitz idzinza revaSamoyed (uye hama wePomeranian ). Aya mamwe marudzi emhando akafanana neiyo shanduro yeJapan yeiyo Spitz imbwa, asi zviri nyore kuwana.
Iwo Samoyed ari imwe imbwa yekuJapan , avo vakatanga kuonekwa kumativi e19th Century.
Ivo vanozivikanwa nekufara kwavo kuita rombo rakanaka, vanofarira kutamba uye, saJapan Spitz, vanoita dzakanaka imbwa dzemhuri.
Nekudaro, nekuda kwehukuru hukuru hweiyo Samoyed (yakatenderedza 19 kusvika 23 inches), ivo vane yakanyanya yakanyanya kurovedza mota yekutyaira.
Iyo Pomeranian imbwa yekuEurope , yakatanga kuonekwa muzana ramakore rechi 16.
Imwe yeiyo diki diki Spitz imbwa, iwo ari pakati pe5 ne11 inches inches.
Pomeranians vanozivikanwa nehunhu hwavo hune hushamwari uye hune rudo, asi vanogona kunge vari vega uye nekukurumidza mukuedza kuzviratidza.
Kunyangwe isiri mutsivi akakwana wechiJapan Spitz, idzi dzimwe imbwa dzakafanana dzinogona kunge dziri chinhu chekurangarira kana uchivhima mbwanana iyoyo yakakwana.
Izvi hazvisi zvisizvo zverudzi rweSpitz; ruzhinji rwembwa dzeSpitz dzakachena.
Panyaya yeJapan Spitz, jasi ravo jena rinobva kune iro revaSamoyed, avo vanowanzo chena kana 'bhisikiti'.
Iri jasi jena gobvu rinouya kubva kuchinangwa chekutanga chekuberekesa cheSamoyed chekufudza mhuka dzemhuka munzvimbo inotonhora, zvichireva kuti bhachi raida kuchena.
Jasi ravo rakazopfuudzwa kuvazukuru vavo (kureva. The Japanese Spitz) uye ruvara rwakazochengetwa nekuda kwekusarudzika kwechena nevaberekesi.
Muchena ndiro chete rinogamuchirwa ruvara here?
Hongu, wechiJapan Spitz anofanirwa kuve chena, uye chena chete!
Maererano ne mhando yavo (kune ese akasiyana makirabhu emakirabhu) iro chete rinogamuchirika ruvara rwembwa iyi chena.
IJapan Spitz inoda maminetsi makumi mashanu ekurovedza muviri zuva nezuva.
Kunyangwe uchibva kumhuri imwechete seyaSamoyed, imbwa iyi hairegereri kutonhora chaizvo , uye zvakawanda zvinofarira kutonhora kwakapfava. Kana kutonhora kusingadzivisike, vanofanirwa kuchengetwa mukati mehusiku zvakanyanya sezvinobvira.
IJapan Spitz inogona kubudirira munzvimbo dzakasiyana siyana dzekugara.
Ivo vanoita zvakanaka nekamuri yekumhanya vachitenderera mukati, asi ivo havana kupokana nezve nzvimbo.
Chero bedzi vaine nzvimbo yekutambanudza makumbo, wechiJapan Spitz anongofara mufurati sezvavari papurazi.
Vari imbwa yakanaka kumhuri , hunhu hwavo hunotyisa uye hwekutamba hunovaita ivo mutambo wakanaka nevana.
Kudzingirira bhora, frisbee, kana chero chinhu chipi zvacho chauchakanda kwavari ibasa ravanofarira.
Ivo vanogona kuve a mutambo wakanaka kune mukuru anoshanda , sehunhu hwavo hwerudo uye hwekuzvipira hunovaita shamwari yakanaka.
Hukuru hwembwa iyi hunosiyana pakati pemhando dzekubereka nenyika:
American kirabhu kirabhu 12 kusvika ku15 inches
ChiJapan Kennel Kirabhu 11 kusvika ku15 inches
UK Kennel Kirabhu 13.5 kusvika 14.5 inches
Chiyero chekutanga chekuJapan chinoratidza kuti imbwa iyi inofanira kunge iri pakati pegumi nemasere kusvika makumi matatu nemasendimita.
Nekudaro, iyo American Kennel Club inoti pakati pe12 ne15 inches iri echokwadi.
MuUK neAustralia, kirabhu yega yega yekuberekera inoraira kuti Japan Spitz inofanira kunge iri pakati pe13.5 ne14.5 inches.
Kunyangwe zvese zviyero zverudzi zvichisiyana muhukuru zvinodiwa, zvese zvine chinhu chimwe chakafanana; maJapan Spitz akakura kupfuura hama yavo Pomeranian.
Ivo vanoita shamwari huru kune vanhu veese mazera nekuva: ane rudo, akazvipira uye akakwirira mweya - achivaita vatambi vekutamba uye imbwa dzinotarisa.
Idzi imbwa dzinotsvaga kutsvaga , dzinobudirira nekubatana kwevanhu.
Imbwa dzeJapan Spitz dziri pakufara kwazvo dzakatenderedza varidzi vadzo, ngazvive kutamba mitambo mupaki, kudzidzisa kwekunyepedzera kana kungogumbatira pasofa.
Uku kuzvipira kune varidzi vavo kunovaita kuti vatarise zvakanyanya kune varidzi vavo uye nezvavanoda. Nekusimbiswa chaiko, imbwa idzi dzinotarisa pane zvakadzama zvinofanirwa ita kudzidziswa mhepo .
Nekudaro, iko kuzvipira kumwechete kunoreva kuti ivo vanowanzoda kupatsanura kunetseka uye hunhu hunoparadza kana vakasiiwa vega kwenguva refu.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti maJapan Spitz anofarira kuhukura nekuwungudza, kunyanya kana uchifinhwa kana kutyisidzirwa .
Idzi imbwa dzinoda kutenderedza kapu imwe yemhando yepamusoro kibble - zvakaringana kaviri zuva nezuva.
Nyama inofanira kuve yepamusoro yezvinhu zvakanyorwa.
Ne canine kufutisa kuri kuwedzera, zvakakosha kuti uzive chaizvo kuti unodyisa imbwa yako zvakadii. Izvi zvinonyanya kuitika apo uchishandisa kibble kudzidziswa.
Idzi imbwa dzinongofara dzichimedza karoti kana mimwe michero inogutsa imbwa kana muriwo.
IJapan Spitz imbwa ine rudo, yakatendeka uye yakangwara, yakakwana kune vanhu vese vanobva kumarudzi ese ehupenyu.
Ivo havasi kupokana nenzvimbo yavo uye vanofara kwazvo kana vaine muridzi wavo kana varidzi. Vanoda kuve vekunze kana kutamba asi vanoda kuve nemativi evaridzi vavo vachiwana kukwikwidzanawo.
Hunhu hwavo hwakavimbika hunoreva kuti havaite zvakanaka nekusiiwa vega, semhedzisiro, varidzi vanofanirwa kukwanisa kupedza rakawanda rezuva ravo nembwa yavo.
Kusiya imbwa iyi vega kwenguva yakareba kunogona kukonzera hunhu hunoparadza uye husingadiwe.
Iwe une Japanese Spitz kumba here? Tisiye komendi ichitipa pfungwa dzako pane iyi imbwa inomhanyisa mumashoko.
Zvese Nezve Inonakidza Corgi
Bhuruu yeGerman Mufudzi: Iyo Yakazara Yekubereka Mbiri
dhadha kuvhima imbwa mazita echirume
half jack russell half chihuahua
imbwa inochema asi hairutsi
akasarudzika echikadzi goridhe Retrieter mazita